Armand Duplantis6မီတာနှင့် 17 စင်တီမီတာမှာတိုင် Vault အတွက်က& | Apg29
Armand Duplantis6မီတာနှင့် 17 စင်တီမီတာမှာတိုင် Vault အတွက်က&
ဒါဟာအလွန်ကျယ်သောအသံနှင့်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်သူငါတို့မြော်လင့်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းအကူအညီနဲ့ပေမယ့်အမှတ်မထှကျဘဲနိုင်ပါတယ်။ Duplantis ပြန်ဖျာပေါ်တွင်ပြပ်ဝပ်ပေမယ့်ငါတို့မြော်လင့်ထာသို့အပေါင်းတို့သည်လမ်းစောင့်ရှောက်!
6 မီတာနှင့် 17 စင်တီမီတာ
ဆွီဒင်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင် Armand Duplantis ပိုလန်အတွက်ညနေပိုင်းတွင်အိမ်တွင်း Gala မှာတိုင် Vault အတွက်ကမ္ဘာ့စံချိန်ကျိုးပျက်ခဲ့သည်။
"မန်းဒ" ဟုခေါ် Armand Duplantis တစ်ဦးအမေရိကန်-ဆွီဒင်တိုင် vaulter ဖြစ်ပါတယ်။ သူက dual-နိုင်ငံသားအဖြစ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆွီဒင်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။
သူကဒုတိယကြိုးပမ်းမှုမှာ6မီတာနှင့် 17 စင်တီမီတာ၏အမြင့်လွန်။
သို့သော်လည်းငါသည်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်သူငါတို့မြော်လင့်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းအကူအညီနဲ့ပေမယ့်အမှတ်မထှကျဘဲနိုင်ပါတယ်။ Duplantis ပြန်ဖျာပေါ်တွင်ပြပ်ဝပ်ပေမယ့်ငါတို့မြော်လင့်ထာသို့အပေါင်းတို့သည်လမ်းစောင့်ရှောက်!
ရောမ 8: 24a ။ မျှော်လင့်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။
သူကပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအပေါ်ဘားတန်းကိုဆုတ်ပေမယ့်ဒုတိယသူလုပ်ခဲ့တယ်!6မီတာနှင့် 17 စင်တီမီတာ, တိုက်ရိုက်ခုန်ပြီးနောက်ပရိသတ်ကိုနှင့် segerjublade ထွက်ပြေးလေ၏။
ဘယ်လောက်ထက်ပိုသောယေရှုခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီသောမျှော်လင့်ချက် segerjubla မဟုတ်သင့်သလဲ